Nitohana nandritra ny adiny iray ny fifamoivoizana : olona iray maty nianjeran’ny hazobe teo Ambohijatovo | NewsMada
Nitohana nandritra ny adiny iray ny fifamoivoizana : olona iray maty nianjeran’ny hazobe teo Ambohijatovo
Niantefa tamin’ny mpivarotra sy mpandalo iray ny hazobe tapaka teny Ambohijatovo, ny asabotsy antoandro teo. Nitarika ny fahafatesan’olona iray izany. Tapaka nandritra ny adiny iray ihany koa ny lalana vokatr’ity hazo tapaka ity.
Nitrangana loza tampoka, antoandrobenanahary tao anatin’ny fahamainana tanteraka, ny teny Ambohijatovo ny asabotsy teo. Hazobe iray tapaka ary nitsivalana teo amin’ny arabe, tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany. Tsy vitan’izany anefa fa nisy ireo olona teny an-toerana nianjeran’ity hazo ity ihany koa. vehivavy iray 30 taona no maty vokatr’izany, ary roa hafa naratra mafy. Araka ny vaovao voaray, maty teny an-dalana nitondrana azy teny amin’ny hopitaly izy io.
“Nirefotra tampoka ilay hazobe. Nividy zavatra aho ary raha vao niroso kely no tapaka ilay hazobe io”, hoy ramatoa Rasoa nahita ity toe-javatra ity. “Tsy nampoizina kanefa efa mahimahina ihany aho tamin’ity hazo ity. Na ireo hazo hafa aza, mety ho tapaka tampoka toy izao”, hoy ingahy Ranaivo miasa eny an-toerana.
Tapaka tanteraka ny arabe teny Ambohijatovo. Divi-janahary no tsy nampisy fiara notsindrin’ity hazobe tapaka ity. Antsasak’adiny taty aoriana vao tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina. Nampimenomenona ny fahatarana ary mbola nahazo tsiny indray ireto farany vokatr’izany. “Tsy tokony ho asan’ny mpamonjy voina ve ny mitsirika ireny hazo efa antitra ireny sao mety hampidi-doza? Sady izay amin’ny lalam-bahoaka rahateo ity loza ity”, hoy ny fitabataban’ny mpandalo teny an-toerana.
Tapaka nandritra ny adiny iray ny lalana mampitohy an’Ambohijatovo. Nanavotra ireo naratran’ny hazo sy nanapaka ity hazobe ity ny nataon’ireo mpamonjy voina nandritra izay fotoana izay. Naharitra ihany ny asa fanapahana noho ny haben’ny hazo sy ny sampana taminy. Raha ny fanazavana, anton’ny fahatapahana tampoka ny fahalozorana sy fahanteran’ny hazo. Vokatry ny orambe nikija tsy an-kijanona teo aloha teo ny mety ho anisan’ny nanafaingana ny fahatapahana tampoka.
Ahina hitranga matetika
Ankoatra ity loza teny Ambohijatovo ity, ahina ny mety mbola hitrangan’ny fahatapahana hazobe tahaka izao eto an-dRenivohitra. Ny taon-dasa teo, nahatapaka hazobe teny Antaninarenina ka nahasimbana fiara; nisy ihany koa ny nahafatesana miaramila iray ihany koa nianjeran’ny hazo.
Mbola maro ireo hazo efa antitra mipetraka amoron-dalana eto amintsika, izay mila fanaraha-maso. Efa nanapaka ihany ny mpamonjy voina toy ny teny Antsahabe, saingy izao mbola nahitana hafa namoa-doza izao.
Ankoatra ny hazo, ahina ny mety hihotsahan’ny tany, ny fianjeran’ny trano, ny fiakaran’ny rano, sns. Tranga mateti-piseho ihany izany rehefa amin’ny andro fahavaratra tahaka izao, izay mitaky asa ho an’ny mpamonjy voina, ny BNGRC amin’ny fanaraha-maso izay mety hitera-doza. Tompon’andraikitra ihany koa ny rehetra amin’ny fijerijerena matetika ny manodidina azy.